Featured Blog Posts – March 2013 Archive (20)
संरक्षणको अभावमा पर्यटकीय महत्व बोकेका तालहरु संकटमा
धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेका बाजुराका एक दर्जन भन्दा बढी तालहरु संरक्षणको अभाबमा संकटमा परेका छन् । जिल्लामा प्राकृतिक सौन्दर्य र धार्मिक महत्व बोकेका खप्तड दह, छेडेदह, बुढिनन्दा, कैलाश ताल, राक्षस ताल, त्रिबेणी, कालाजग्रा गुफा ताल, दउने ताल लगायतका तालहरु अस्तित्व संरक्षणको अभाबमा क्रमशः संकटमा परदै आएका छन् । उचित सम्बद्र्धन र बिकासका लागि कसैको ध्यान नगएपछि धार्मिक तथा पर्यटकिय सम्भाबना बोकेका ति तालहरुको अस्तित्व खतरामा परेको हो ।
खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्ने खप्तड…
Added by Chandra Budha on March 21, 2013 at 2:00pm — No Comments
१२ रुपियाँका मामा
वसन्तपुर, नेपालको ऐतिहासिक अनि पर्यटकीय सानको केन्द्र । इतिहासलाई उथलपुथल पार्ने कोतपर्व यसैको काखमा भयो । ०७ सालयता बौद्धिक जमघटको थलो पनि भयो, वसन्तपुर । धेरै साहित्यकारले आफ्ना कृतिमा न्युरोड–वसन्तपुरको अध्ययन संस्कारबारे उल्लेख गरेका छन् । त्यतिबेला नेपालका चर्चित साहित्यकारहरूको साहित्यिक विमर्शको गतिलो थलो यही थियो । वसन्तपुरको बाहिरी मुहार अहिले पनि लगभग उस्तै छ तर फेरिएको छ वातावरण ।…
Added by pratima silwal on March 19, 2013 at 9:00pm — No Comments
नयाँ सरकारसँगै चितवनमा पनि निर्वाचनको चहलपहल
भरतपुर । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को गठनसँगै केन्द्रमा निर्वाचनको चहल पहल सुरू भएको छ । त्यसैको प्रभावसमेत चितवनमा देखा परेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमहरु धमाधम गर्न थालेको छ ।
निर्वाचन हुने, नहुने अनिश्चितलाई तोड्दै गत बिहीबार बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो । दलीय सहमतिका आधारमा आगामी वर्षको असार ७ गतेलाई…
Added by अल्टर कान्छो’ on March 17, 2013 at 10:08pm — No Comments
प्राध्यापक अभि सुवेदीको कलेज लाइफ-आन्दोलन गर्दा आर्मीको कुटाइ खाएँ
२०१९ सालको कुरा, म तेह्रथुमबाट भर्खरै एसएलसी सकेर मोरङ झरेको थिएँ आइए पढ्न । कलेज हाजिर भएको भोलिपल्ट ‘शिक्षाको विकासमा राजनीतिको भूमिका’ विषयमा वादविवाद प्रतियोगिता रहेछ, अंग्रेजी भाषामा । कलेजको परिवेशसँग राम्रो घुलमिल नभए पनि मलाई त्यसमा भाग लिन मन लाग्यो । अंग्रेजीमा राम्रो छु भन्ने आत्मविश्वास पनि थियो । मैले आफ्नो क्षमता देखाएँ । प्रतियोगिताको साँझदेखि त मेरा अघिपछि साथीहरूको झुन्ड बढ्न थालिहाल्यो नि !…
Added by pratima silwal on March 17, 2013 at 9:30am — No Comments
अछामको बयालपाटा अस्पतालमा आपतकालिन रक्तसंचार सेवा संचालन
बयालपाटा अस्पतालमा आपतकालिन रक्त संचार सेवा संचालनमा ल्याईएको छ । जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको वयालपाटा सामुदायिक अस्पतालले आफ्ना सेवा बढाउंदै जाने क्रममा आकस्मीक रक्त संचार सेवा पनि संचालनमा ल्याएको हो । आपत्कालिन रक्त संचार सेवा संचालनमा आएपछि बिरामीलाई रगत चढाउन सकिने भएको छ । न्याय हेल्थ नामक गैरसरकारी संस्थाले संचालन गरीरहेको अस्पतालमा २४ सै घण्टा अकस्मीक सेवा , प्रसुती सेवा, एम्बुलेन्स सेवा लगायतका सेवा विशेषज्ञ चिकित्सकबाट प्रदान गरीरहेको छ ।
Added by Purna Bahadur Khadka on March 13, 2013 at 6:00pm — No Comments
शिव र शुभद्रा संयुक्त पुर्जा बनाउने उदाहरणीय जोडी
ललितपुरको दक्षिणी गाविस देवीचौर ४ का शिवप्रसाद बजगाईलाई संयुक्त लालपुर्जाको फाइदा बुझ्न ६ महिना लाग्यो । आफ्नो नाममा भएको सम्पत्ती श्रीमतीको पनि हो भन्ने ठानेका उनलाई संयुक्त लालपुर्जा बनाउँदा आफ्नो निर्णय चल्दैन की जस्तो लागेको थियो । त्यसैले उनले ६ महिनासम्म संयुक्त लालपुर्जा बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरिरहे । गाउँका जान्ने बुझ्नेलाई सोध्दा संयुक्त पुर्जा बनाउनु भनेको सम्पत्तीमा महिलालाई पनि आधा हक दिनु हो भन्ने बुझेपछि राजी भए पुर्जा बनाउन ।…
Added by Binod Sharma on March 13, 2013 at 4:00pm — No Comments
पैसा कमाउन कालापार (भारत) छिरेको कान्छो छोरा रामबहादुर गिरी काग तिहारको दिन टुप्लुक्क घर आइपुग्दा ऐभान र नन्दकली कम्ती खुसी थिएनन् तर त्यो खुसी त्यति छिट्टै लुटिन्छ भन्ने उनीहरुलाई के थाहा ? यथार्थमा त्यही भयो जुन उनीहरुले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् ।
लक्ष्मीपूजाको मध्यरात ! ओछ्यानमा सुतिरहेको छोरालाई आँखै अगाडिबाट लछारपछार…
Added by Dilli Malla on March 11, 2013 at 9:00am — 1 Comment
हात मुख जोर्न मुस्किल भएपछि चितवनको पहाडी गाविसका चेपाङहरु लालीगुराँस बेच्न बजारतिर झरेका छन् । उनीहरु लालीगुँरास लिएर टाँडी बजार र नारायणगढ बजार झरेका छन् । गएको वर्ष परेको लामो खडेरीले चेपाङहरुको मुख्य खाद्यन्न बाली मकैको उत्पादन घटेपछि भोकमरीको सामना गर्दै चेपाङहरु लालीगँुरास बेच्न बजार झरेका हुन् । आर्थिक विपन्नताका कारण कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका चेपाङहरु मौसम अनुसार जंगली…
Added by अल्टर कान्छो’ on March 11, 2013 at 8:00am — No Comments
इक्वल एक्सेसलाई एवोन अवार्ड
इक्वेल एक्सेस नेपालले महिला हिंसा बिरुद्ध उदाहरणीय जागरण प्रयासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । महिला हिँसा विरुद्ध उदाहरणीय सञ्चार सामग्री उत्पादन गरेबापत यस वर्षको एवोन सञ्चार पुरस्कारबाट इक्वेल एक्सेस सम्मानित भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा न्युयोर्कस्थित…
Added by Indra Dhoj Kshetri on March 8, 2013 at 2:00pm — No Comments
सन्दर्भ नारी दिवसको !
विश्वभर १०३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाईरहदा आज मेरो मनमा अनेकौँ कुराहरु खेलेका छन् । हेर्दा हेर्दै नारी दिवस वा भनौँ महिला दिवस मनाउन थालेको पनि १०३ बर्ष भैसकेछ । यो दिवस १०३ वर्ष अगाडि साहसीक ग्रीक महिला लिसिस्ट्राटाले फ्रेन्च युद्धताका युद्ध अन्त्यका लागि पुरुषका विरुद्ध थालेको यौनिक आन्दोलनबाट प्रारम्भ भएको थियो वा यो दिवसको सुरुवात भएको थियो । नेपालमा पनि यो दिवस विं सं २०४६ सालदेखि मनाउन थालिएको हो । तर दिवस मनाईरहदा नेपाली महिलाहरुमा कति परिवर्तन भयो त ? के हामी त्यसको बारेमा…
Added by sabita Acharya on March 8, 2013 at 10:30am — No Comments
मेरो माओवादी दाई
एकछिनसम्म उज्यालो आमाको अनुहार एक्कासी अध्यारो भयो । आमालाई के भयो थाहा पाउनै गाह्रो भयो । घरमा मैले नचिनेको एकजना पाहुना आएका थिए । ती पाहुना आएदेखि नै आमाको अनुहारको चमक उडेको थियो कोही भित्र आउदा पनि तर्सेर हेर्नुहुन्थ्यो । आमालाई को हो भनेर पनि सोध्न सकिन । आमा हातमा चिया वोकेर त्यो नयाँ मान्छे बसेको ठाउँमा आउनु भयो । म पनि आमाको पछि लागेर गए । आमाले मैले नचिनेको मान्छेलाई चिया दिदै डराउदै त्यो मान्छेको ढाडमा हात राख्दै विस्तारै भन्नु भयो मेरो घरमा पनि माओवादी पस्यो ।
Added by sabita Acharya on March 5, 2013 at 4:35pm —4Comments
मतदाता नामावलीमा चितवनका करिब एक लाख छुटे
निर्वाचनको चर्चा चलिरहेका बेला चितवन जिल्लामा भने मतदानको उमेर पुगेका करिब एक लाख मतदाता मतदाता नामावली संकलनमा सहभागी नभएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । २०६८ सालको जनगणना तथ्याङ्कअनुसार पाँच लाख ६९ हजार ९८४ जनसंख्या रहेको चितवनमा जनसंख्याको साठी प्रतिशत करिब तीन लाख ४१ हजार ८३९ जनसंख्या मतदानको लागि उमेर पुगेको अनुमान छ । जसमध्ये ९७ हजार ८३९ जना मतदाता नामावली संकलनमा सहभागी नभएका हुन् । हालसम्म दुई लाख ४४ हजारको मात्र…
Added by अल्टर कान्छो’ on March 5, 2013 at 8:00am — No Comments
सर्वत्र डा कोइरालाको ससम्मान पुनर्स्थापनाको माग
राजधानीको महाराजगञ्जमा रहेको शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा भगवान कोइरालाले राजीनामा दिएको खबर सार्वजनिक भएसँगै उनलाई ससम्मान पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । यसको सबैभन्दा बढी दबाब प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईमाथि परेको छ ।
केही महिनाअघि मात्रै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा एकाउण्ट खोलेका प्रधानमन्त्रीलाई उनका फलोअरहरुले कोइरालाको ससम्मान पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक भएको तीन महिनामै डा भगवान कोइरालाले…
Added by Binod Sharma on March 4, 2013 at 2:00pm — No Comments
१५ बर्ष पुगेछ, यो खाल्डोमा डेरावास भएको पनि । १५ वटैजति भए होला डेरापनि, कैले घरबेटी अनुसार आफु नहोइदिने, अनि कैले आफुअनुसार घरबेटी नहुने । मेरो डेरा जिन्दगी अस्थिर हुनाको वनलाइनर रिजन यही हो । फेरि, यही वनलाइनर रिजनभित्र अनेकौं कथाहरु छन्, अनेकौं ब्यथाहरु छन्, लेख्ने नै हो भने त महाकाब्य नै बन्ला, तर भो तेतापटी नकोट्याँऊ । भोगाईले नै…
Added by pawan neupane on March 4, 2013 at 2:00pm —2Comments